UMengameli emizamweni yokuletha ukuthula nozinzo eTunisia - Bayede News
Izinkulungwane zabantu baseTunisia babhikishe enhlokodolobha ngeSonto bephikisana nokuthathwa kwamandla kukaMengameli uKais Saied cishe amandla aphelele njengoba amanani akhulayo angena emgwaqweni emasontweni adlule ephakamise ubungozi benkinga yezepolitiki evusa uthuthuva.
Ngemuva kwesonto izinkulungwane zikhombisile ukuthi zisekela uSaied, amanani akhulayo akhulisa amathuba okwehlukana kwezepolitiki eTunisia okuqubuka ezimpini zomgwaqo phakathi kwamaqembu ayizimbangi.
“Ngeke sikwamukele lokhu kuvukelwa kombuso. Sekwanele,” kusho uYassinben Amor, umbhikishi.
Ukuba khona kwamaphoyisa amaningi kakhulu kumise noma iyiphi imashi ezansi eHabib Bourguiba Avenue enkabeni yeTunis, kepha yize abanye bababhikishi bejikijela amabhodlela epulasitiki, akubanga khona kungqubuzana. Okhulumela uMnyango Wezangaphakathi uKhaled Hayouni uthe amaphoyisa azobhekana nababhikishi bezinhlangothi zombili ngendlela efanayo.
“Amaphoyisa aseTunisia ngamaphoyisa ezwe uqobo futhi awangeneleli kunoma yiluphi uhlangothi lwezepolitiki,” esho.
Uxoshe uNdunankulu, wamisa iPhalamende futhi waqala ukuphatha izwe yedwa ngoNtulikazi lapho izitha zakhe zabiza lesenzo sakhe njengokuvukela umbuso. Ngenyanga edlule ushaye eceleni okuningi koMthethosisekelo, athe uzoqoka ikomidi elizolichibiyela, wengeza ngokuthi angakhipha isinqumo.
Ukungenelela kwakhe kubonakale kudumile ngemuva kweminyaka yokuntengantenga kwezomnotho kanye nokukhubazeka kwezepolitiki, kepha sekungabaza ukuzuza kwentando yeningi okwenziwa ngabantu baseTunisia ngesikhathi senguquko yangowezi-2011 eyasusa uthuthuva lwase-Arab Spring.
“Siyaphikisana nokuvukelwa kombuso. Siyayichitha inkulumo yoqhekeko,” kusho uJaouhar Ben Mbarek, isishoshovu esivelele kanye nomgqugquzeli omkhulu wemibhikisho emelene noSaied, ethi kumele bathembeke kulabo ababulawa kowezi-2011.
USaied uqoke uNajla Bouden Romdhane njengondunankulu, kodwa akakabizi uhulumeni, oyisandulela esibalulekile kunoma iyiphi imizamo yokuxazulula inkinga yaseTunisia esondelayo kwezezimali zomphakathi, yize uSaied ethe ngoMgqibelo uzokwenza lokho kungekudala.
USaied uthe uzoqala izingxoxo nabaseTunisia mayelana nekusasa emhlanganweni ozoba ngoMgqibelo noNgqongqoshe Wesikhashana Wezangaphakathi uRidha Gharsalaoui. Noma iyiphi inkulumompendulwano engafaki amaqembu amakhulu ezepolitiki noma ezinye izinto ezisunguliwe zomphakathi, njengenyunyana yabasebenzi enamandla, ingahle iphakamise ukuphikisana okusobala nezinyathelo zakhe.
Abaxhasi baseNtshonalanga, badinga ukuvimbela ukuwa kwezimali zomphakathi zaseTunisia, bacele inqubo ebandakanyayo yokuqeda isikhathi sezinkinga, kanye nomugqa wesikhathi ocacile. Ngokuqondiswa kwezepolitiki ngekusasa laseTunisia kuhamba kancane, uSaied ukhombe ekugqugquzelweni komgwaqo ukusekela isikhundla sakhe. Ngesonto eledlule bangaphezu kwezi-8 000 ababhikishi abahlangane eTunis bezokhumbisa ukweseka uSaied, kusho izintatheli kanye nophiko lwezindaba zombuso. Ngakusasa, uSaied uthe abantu abayizigidi eziyi-1.8 baphume bazomxhasa.